Ushizi wembuzi kanye namakhowe athosiwe | Ikhishi Recipes
Ushizi wembuzi kanye nama-mushroom toasts
UMaria vazquez | 09/01/2022 10:00 | IMontaditos
Aphindaphindeka kangakanani amathosti ukuze alungiselele isidlo sakusihlwa esithuthukisiwe. Futhi nabanye abafana nalokhu ushizi wembuzi kanye nama-mushroom toasts kulula ukuyithola kahle. Kuyinhlanganisela elula kodwa ethandwa cishe wonke umuntu. Futhi sisesikhathini samakhowe, kungani ungawasebenzisi?
Lawa mashizi wezimbuzi namakhowe angaba yi-canapé enhle yomgubho wakho olandelayo ekhaya. Ukunciphisa usayizi wesinkwa nokubheja endaweni eyodwa kuphela okuzodingeka ukunake, kanye nesethulo, ukuze zivele etafuleni.
Yiqiniso, ungasebenzisa ushizi owuthanda kakhulu ukwenza le toast. Okwelashwa kakhulu nakho kungaba yisinqumo esihle kakhulu. Futhi uma kuziwa kumakhowe, sebenzisa noma yini onayo esandleni. Ezinye ziyi-tastier kunezinye, kodwa asikho isidingo sokwenza izinto zibe nzima. Okubalulekile wukupheka ngendlela efanele.
Ushizi wembuzi kanye ne-mushroom toast iba enye indlela ekahle yokwenza isidlo sakusihlwa.
Isikhathi Ukupheka: 12 m
Isikhathi esiphelele: 17 m
2 izingcezu zesinkwa sasesigodini
Izingcezu eziyi-6 zeshizi lembuzi
200 g. ikhowe
Epanini lokuthosa sishisa amafutha omnqumo futhi susa ugalikhi umzuzu uqaphele ukuthi ungashi.
Ngemuva sihlanganisa amakhowes futhi usonge okudingekayo ukuze bakhulule amanzi bese ayahwamuka.
Ngakho-ke, senza isizini futhi ufafaza iparsley bese upheka omunye umzuzu owodwa.
Ngenkathi, sigcoba isinkwa futhi sibeka izingcezu ezintathu zikashizi ku-toast ngayinye.
Beka amakhowe agayiwe phezulu bese uphakela ushizi wembuzi namakhowe athosiwe ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » IMontaditos » Ushizi wembuzi kanye nama-mushroom toasts